Gbasa nzọ Forgha N'ihi Oke Uru! - Mụọ ahia 2 Eprel 2021
Mụọ 2 Trade 2021 Ntuziaka Na XNUMXgbasa Gbasara!
Platformsgbasa mgbasa ozi ịkụ nzọ na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọdịnihu ọnụahịa nke ngwa ọrụ ego na-enweghị ịnwe akụ ahụ na-akpata. Nke a gụnyere ihe niile sitere na ọla edo, mmanụ, gas, ebuka, indices, na cryptocurrencies.
Echiche doro anya bụ na ịchọrọ ịchọpụta ma ị chere na akụ ahụ ga-arị elu ma ọ bụ ala n'ihe metụtara ọnụahịa ya ugbu a. Ọ bụrụ na ị ziri ezi, a na-agbakọ uru gị site na ịnara ego gị, site na ọnụọgụ nke ihe onwunwe bara ụba site.
Ndị ahịa na-ahọrọkarị mgbasa ịkụ nzọ broka n'ihi na akwa ikike - enwetaghị ụtụ isi. Ọzọkwa, ọ bụghị naanị na ị nwere ike ịzụ ahịa na-akwụghị ụgwọ ọrụ ọ bụla, mana mgbasa na-abụkarị asọmpi karịa ụzọ ụzọ ọdịnala ọdịnala.
Na nke ahụ, ịgbasa ịkụ nzọ nwere ike ịpụta dị ka ihe mgbagwoju anya na ilele anya mbụ ma ọ bụrụ na ị naghị abanye ebe ahụ. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-atụ aro ịgụ akwụkwọ anyị Mụọ 2 Trade 2021 Guide On Spread Betting - ebe anyị na-akọwa ihe niile ịchọrọ ịma.
Mara: Agbanyeghi na igbasa saịtị ịkụ nzọ na-enye gị ohere ịzụ ahịa karịa ihe inwere na akaụntụ gị site na sistemụ oke, nke a pụtakwara na ị ga-atụfu oke osisi gị niile ma ọ bụrụ na mmiri agbaa ahịa gị.
Gịnị bụ ịgba ịkụ nzọ?
Bettinggbasa mgbasa bụ ụdị azụmaahịa - nke yiri nke CFDs. Nke a bụ n'ihi na ị ga-enwe ike ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego, nke ị nwere ike ịzụ ahịa na-enweghị ịnweta nke akụ ahụ. Isi echiche bụ na ịkwesịrị ịkọwa ma ị chere na akụ ahụ ga-abawanye ma ọ bụ belata na uru - n'ihe metụtara ọnụahịa ahịa ya ugbu a.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na FTSE 100 na-ere ahịa na isi 2,700 - usoro 'ogologo' ga-egosi na ị na-eche na ndeksi ahụ ga-abawanye na uru. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na itinye iwu 'obere', ị ga-eche nke ọzọ. Tupu i tinye usoro iwu gị, ịkwesịrị ịbanye osisi.
Na ụwa nke ịgbasa nzọ, a na-egosipụta azụmaahịa gị dị ka 'oke-nha-ebe'. Ekem, maka isi ihe ọ bụla nke ị ziri ezi ma ọ bụ na-ezighi ezi site na ya, baa ụba site na osisi gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị tinyere aked 1 kwa isi na FTSE 100, wee mechie azụmahịa ahụ na isi 2,800, nke a ga-apụta na ị meriri £ 100.
Nke a bụ n'ihi na FTSE 100 mechara 100 ihe dị elu (2,800 - 2,700), na oke-gị-ebe bụ £ 1. Na njedebe ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, ọ bụrụ na i mechaa - mkpofu gị niile ga-eguzokwa na £ 100 - dịka ihiela site na 100 isi.
Kedu uru na ọghọm nke ịgbasa ịkụ nzọ?
A na-akwụkarị uru na ụtụ isi
Mee ka ọtụtụ puku ego mata ihe
Nhọrọ nke ịga ogologo na mkpụmkpụ na ntinye ego gị
Readgbasa ịkụ nzọ na-enyekarị ahia na-enweghị ọrụ
Na-azụ ahịa karịa ihe ị nwere na akaụntụ gị site na oke
O nweghi njedebe na ikike gị
Nnukwu ihe ize ndụ karịa ịzụ ahịa ahịa ọdịnala
Nwere ike tufuo osisi gị niile na otu azụmaahịa
Olee otu Spgbasa ịgba chaa chaa si arụ ọrụ?
Bettinggbasa nzọ na-arụ ọrụ na usoro ihe, ebe uru ma ọ bụ mfu gị dabere na ọnụọgụ nke isi ị gafere ma ọ bụ n'okpuru na azụmaahịa ahụ. Gbagwojuru anya? Ọfọn, ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa Nike na $ 85.50. Na mgbasa ozi ịkụ nzọ, $ 85.50 ga-atụgharị gaa na isi 85.5. Wee, ka anyị kwuo na ị gara 'ogologo', nke pụtara na ị chere na ebuka Nike ga-abawanye uru.
Ọ bụrụ na ị mechie azụmahịa gị mgbe ọnụahịa Nike dị 87.0 (ma ọ bụ $ 87.00), azụmaahịa ịkụ nzọ gị gbasaa na-aga nke ọma site na isi 15. Nke a bụ n'ihi na n'ihe atụ a - isi okwu ọ bụla dabere na $ 0.10 ọ bụla nke ngwaahịa ahụ gbagoro. Yabụ, ọ bụrụ na anyị etinye £ 1 n'otu isi, anyị gaara aga with 15 (15 isi x £ 1).
N’otu aka ahụ, ọ bụrụ n ’ị £ 5 n’otu isi, ahịa azụmaahịa Nike gị ga - enweta net 75 na uru (ihe 15 x x £ 5). N'ezie, enwere ike na mgbasa ozi ịkụ nzọ gị ga-emegide gị mgbe ụfọdụ. N'aka ozo, enwere uru nke Nike ala, ị ga-efu ego.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ị rụpụtara azụmahịa gị mgbe ọnụahịa Nike dị $ 82.50. Dịka nke a sụgharịrị na nkwụsị nke ihe 30 (85.5 - 82.5), otu £ 1 ga-efu gị £ 30. N'ezie, enweghị oke ego ị nwere ike ida na ịgbasa ịkụ nzọ - ebe ọ bụ na azụmaahịa dabere na oke.
Ka anyị lelee ihe atụ ole na ole ndị ọzọ iji kpochapụ mgbasa ịkụ nzọ.
🥇 Ihe Nlere nke Azụmaahịa Na-agbasa Azụmaahịa Na-aga nke Ọma
Na mbụ anyị atụ, anyị na-aga ahia mmanụ. Anyị na-eche na na $ 28.0 kwa gbọmgbọm, ngwongwo a dị oke ala. Site na asịrị nke mbelata mmepụta nke OPEC na Russia, ị kpebiri ịga ogologo oge. Nke a pụtara na ị chere na ọnụahịa mmanụ ga-abawanye maka ọnụahịa ya ugbu a $ 28.0 - ma ọ bụ 28.0 isi.
Place na-etinye iwu dị ogologo na mmanụ na £ 5 kwa ntụpọ
Nke a pụtara na maka isi ọ bụla (ma ọ bụ $ .10) na mmanụ na-arị elu ma ọ bụ na-erughị na uru, ị ga-emeri ma ọ bụ tufuo £ 5
A awa ole na ole mgbe e mesịrị, mmanụ na mbara igwe-rọketi ka $ 33.50, ma ọ bụ 33.50 ihe
Nke a pụtara 55 isi Ọzọ karịa isi 28.0 ị nara mgbe ị nyere iwu gị (cheta, isi ihe na-adabere na ọnụ ọgụgụ mgbe ntụpọ ntụpọ).
Dika odi, i meriri £ 275 na ahia a.
Nke a bụ n'ihi na isi ise dị mma karịa osisi nke £ 55 kwa ntụpọ pụtara £ 5
Dịka anyị kwuru na mbụ, ịgbasa azụmaahịa ịkụ nzọ agaghị aga n'ihu ihu ọma gị - yabụ ugbu a, anyị kwesịrị ileba anya n'ihe atụ na-agaghị eme nke ọma.
🥇 Ihe Nlere nke Azụmaahịa Na-agbasa Akpọsa nke Ọma
Iji mee ka ihe dị mfe, anyị ga-arapara n’otu ihe atụ dị n’elu, ebe ọnụ ahịa mmanụ dị na $ 28.0 ma ọ bụ 28.0. Naanị n'oge a, ihe anaghị aga ịhazi.
Mgbe awa ole na ole gachara, mmanụ dara na $ 26.00, ma ọ bụ isi 26.0
Dị ka ọnụahịa mbụ bụ 28.0 isi, ma ọ dị ugbu a na 26.0 - nke a sụgharịrị ịbụ ọnwụ nke 20 isi
Ka o siri dị, lost 100 furu efu na azụmaahịa a
Nke a bụ n'ihi na isi iri abụọ na-aga imegide gị na osisi nke £ 20 kwa ntụpọ bụ ihe efu loss 5
Nke a bụ ezigbo ihe atụ nke otu esi adị mfe idafu ego mgbe ị na-etinye ịgbasa ịkụ nzọ. Na tụgharịa n'akụkụ, ị nwere ike mfe mebie ihe ize ndụ gị site na ịwụnye a ezi uche nkwụsị-ọnwụ iji. Ka anyị na-ekpuchikwu nkọwa ma emechaa, nke a na-enye gị ohere ịhapụ azụmahịa gị na-akpaghị aka mgbe ahịa gafere gị site na pasent akọwapụtara na mbụ.
Ahịa ndị dị a canaa ka ị nwere ike ire mgbe ị na-agbasa nzọ?
N'ihe yiri nke CFDs, gbasaa ịkụ nzọ ịkụ nzọ na-enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku ahịa ego. Nke a na eme ka o doo anya na ị nwere ike ịmepụta pọtụfoliyo dị iche iche nke njigide - awa 24 kwa ụbọchị.
N'okpuru ebe anyị edepụtara ụfọdụ klaasị akụ ndị ama ama nke ị nwere ike ịzụ ahịa na saịtị ịkụ nzọ na-agbasa.
Ihe ndozi: Nwere ike gbasaa ọtụtụ puku agba-acha anụnụ anụnụ na ọtụtụ ahịa. Chee echiche tinyere usoro nke LSE, NASDAQ, na NYSE.
Ụdị: Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịzụ ahịa na ahịa sara mbara, gbasaa nyiwe ịkụ nzọ na-ejikwa indices. Nke a gụnyere S&P 500, Dow Jones, FTSE 100, na NASDAQ 100.
Ike: I nwekwara ike ahia ike. Nke a gụnyere ahịa mmanụ na mmanụ gas.
Ọla siri ike: Ogwe ọla siri ike gụnyere ihe niile sitere na ọla edo, mmanụ, na ọla kọpa.
Ọrụ ugbo: Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta ekpughepụ ngwaahịa ndị ọrụ ubi dịka ọka wit, kụrụ, shuga na ọka - gbasaa nyiwe ịkụ nzọ na-akwadokarị ahịa ndị a.
ETFs: N'ịkọwapụta otu esi agbasa usoro ịkụ nzọ dị oke - ị nwekwara ike ịzụ ETFs.
Ego mba: N'ihe yiri ya ka ị na-ere saịtị, gbasaa ndị na-ere ịkụ nzọ na-enyekwa gị ohere ịkọ ọdịnihu nke ego abụọ a ma ama dịka GBP / USD na EUR / USD.
Ego: Spreadfọdụ na-agbasa saịtị ịkụ nzọ na-enyekwa gị ohere ịzụ ahịa ọdịnihu nke cryptocurrencies na-ewu ewu dị ka Bitcoin na Ethereum.
Gbasa tinggba - Keykpụrụ Okwu
Yabụ ugbu a ị matara ntọala nke ịkụ nzọ na-agbasa, ọ dị mkpa ka anyị lelee ụfọdụ isi okwu na ị ga-ahụrịrị.
Ogologo na nke mkpụmkpụ
Nke mbu - gbaa mbọ hụ na ịmara ogologo oge gị site na nịịka gị. Dị ka anyị kpuchiri nkenke na mbụ, ịga ogologo ahịa na ahịa pụtara na ị chere na akụ ahụ ga- dịkwuo na ọnụahịa. Nke a bụ otu ịtụkwasị iwu 'zụrụ' mgbe ị na-ere CFDs, ma ọ bụ 'oku oku' mgbe ị na-etinye ego na nkwekọrịta nhọrọ.
Ọ bụrụ n ’ị gafere ahịa ịkụ nzọ na-agbasa, nke a pụtara na ị chere na akụ ahụ ga-aba uru. Ọzọkwa, nke a ga-abụ iji 'ere' mgbe ị na-ere CFDs, ma ọ bụ 'tinye nhọrọ' na nhọrọ trading ohere.
Leverage na Oke
Mgbasa nyiwe ịkụ nzọ na-enye gị ohere ịzụ ahịa na ego karịa ka ị nwere na akaụntụ gị. Iji maa atụ, ka anyị kwuo na ịchọrọ ịzụta sto 1,000 bara uru nke osisi Disney. Dị ka ọ dị, ọ bụrụ na ị zụtara worth 1,000 uru nke mbak na onye na-ere ahịa n'ịntanetị, ị ga-enweta worth 1,000 uru nke mbak.
Agbanyeghị, ịgbasa saịtị ịkụ nzọ na-enye gị ohere itinye ihe nkwụnye ego na azụmaahịa gị - yabụ njiri £ 1,000 gị ga-enye gị ohere ịzụ ahịa na ndị ọzọ.
Ka anyị kwuo na achọrọ ka ị tinye oke 10% iji zụọ ahịa Disney
Oke gị dị ka nkwụnye ego na-enweghị nkwụghachi ụgwọ nke onye na-ere ahịa na-edobe ma ọ bụrụ na ahia gị na-emegide gị site na ọnụọgụ ụfọdụ.
Nwere £ 1,000 na akaụntụ gị, nke na-enye gị ohere ịzụ ahịa £ 10,000 bara uru nke osisi Disney
Nke a bụ n'ihi na £ 1,000 pụtara 10% nke oke achọrọ
N’uzo di nkpa, ahia n’elu oke nwere ike iga n’otu n’ime uzo abuo. Ga - emeri mgbasa ozi ịkụ nzọ gị na - agbasawanye mmeri gị, ma ọ bụ na - enweta mmiri ma tufuo oke gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gara ogologo na osisi Disney na ọnụahịa ahụ mụbara site na 20%, ị gaara enweta ngụkọta uru nke £ 200 (20% nke £ 1,000). Agbanyeghị, ka itinye 10: 1 n'ọrụ, uru gị bara uru bụ £ 2,000 (£ 200 x 10).
Ọ bụrụ na ahịa ndị ọzọ gafere, osisi Disney na-agbadakwa site na 10%, ị ga-efu oke gị. Dị ka ndị dị otú a, ahia ahụ gaara abụ mmiri mmiri ma onye na-ere ahịa ga-edebe ego gị £ 1,000.
Dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ itinye ego n'ahịa azụmaahịa, ị ga-enwerịrị ike 'ịgbasa' mgbe ị na-agbasa nzọ n'ịntanetị. Maka ndị na-amaghị, nke a bụ ihe dị iche na nzụta na ire ego nke ihe onwunwe. N'ihe banyere ịkụ nzọ, ọ bụ ihe dị iche n'etiti ọnụahịa ntinye 'ogologo' na 'mkpụmkpụ' - a na-egosipụtakwa ya na isi ihe.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-ere mmanụ.
Ọnụahịa ogologo bụ $ 27.0
Ego dị mkpirikpi bụ $ 27.3
Nke a ruru ihe dị iche na nke 30, nke karịrị 1%
Dị ka ihe atụ dị n'elu, nke a pụtara na ọ dị mkpa ka ị nweta uru ma ọ dịkarịa ala ihe 30 (1.11%) na mgbasa ozi ịkụ nzọ gị na-agbasa naanị iji mebie. Nke a dị oke ọnụ.
Ozi ọma ahụ bụ na mgbasa ozi ịkụ nzọ na-agbasa ozi na-atụ aro na ibe a na-agbasa bụ budata asọmpi karịa nke a.
✔️ Bet Oge
Ikwesiri inyocha 'oge nzọ' tupu ị tinye ahia ịkụ nzọ na-agbasa. Dị ka aha ahụ na-egosi, nke a pụtara nanị oge nzọ gị. Nke a na - abatakarị n’ụdị ụzọ abụọ - nzọ nzọ kwa ụbọchị ma ọ bụ nzọ n’afọ anọ.
Ego a na-akwụ kwa ụbọchị: Oge nzọ a dị mma maka ndị gị chọrọ itinye aka na ya ụbọchị trading. Nke a bụ n'ihi na a ga-achọ ka ị kwụọ ụgwọ ego abalị maka ụbọchị ọ bụla ị na-eme ka mgbasa ozi ịkụ nzọ na-emeghe. Emechakwa, ị ga-azụ ahịa na oke mgbe ị na-eji saịtị ịkụ nzọ na-agbasa, nke na-abịa na ọnụ ahịa. Mgbasa na-adịkarị ala ha.
Nkeji atọ: Egwuregwu nke anọ ọ bụla dabara adịrị ndị nke chọrọ ịmepe azụmahịa na ogologo oge. Nke a bụ n'ihi na ịgaghị ana gị ụgwọ karịrị ụgwọ maka ụbọchị ọ bụla ị mepere ahịa ahụ. Dị ka ndị dị otú a, ịnwere ike ịmepe ahia ịkụ nzọ gị na-emeghe ruo ọnwa 3 tupu ọ mechie. Mgbasa na-adịkarị elu.
Inweta mmiri mmiri na ịgba nzọ
Ihe ize ndụ kasịnụ ị na-eche ihu mgbe ị na-agbasa ịkụ nzọ bụ ịme ka azụmahịa gị kwụsị. N’agbanyeghi na anyi kpuchitere n’obere oge otu esi aru oru na mbu, odi nkpa ka anyi bawanye. Ka emechara, a liquidated ahia ga-eme ka ị ghara ida gị dum oke.
Yabụ, ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịchọpụta oke oke achọrọ ka anyị tinye n’ọnọdụ pasent.
Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na ị na-ere ahịa Apple, nke nwere oke chọrọ nke 10%
Want chọrọ ahia £ 5,000 uru nke ebuka, nke pụtara na ị ga-mkpa itinye a oke nke £ 500
Ọ bụrụhaala na ahịa ahụ mepere emepe, ị gaghị emetụ £ 500 a, ka ewepụtara ya na njikwa akaụntụ gị wee tinye ya na akaụntụ gị.
N'otu aka, ọ dị oke mma na ị nwere ike ịzụ ahịa £ 5,000 bara uru nke ebuka Apple site na itinye nkwụnye ego nke naanị £ 500. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ahịa ndị ahụ na-emegide gị, na £ 500 nọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ ndị furu efu n'ozuzu ya. N'ezie, nke a ga - eme ma ọ bụrụ na ọnụahịa Apple gbadara site na 10%, n'ihi na nke a ga - abụ mbelata ụwa nke £ 500.
Tupu ị ruo n'ókè nke mmiri mmiri, mgbasa mgbasa ịkụ nzọ ga-enye gị nhọrọ nke ịgbakwunyekwu ego na akaụntụ gị. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị kwukwara a n'ihu £ 200, a ga-achọ ndị price nke Apple ebuka ịjụ site na ihe ọzọ £ 200 tupu ahia gị emechie.
Na tụgharịa n'akụkụ, ọ bụrụ na ị kwụsịrị na-agbakwunye ọzọ ego gị oke, na gị Apple ahia kụrụ na 10% liquidation akpalite price, na ore ahia ga-emechi gị ahia na-ejigide gị £ 500 oke.
Tụkwasị a Kwụsị-Loss Order
Ozi ọma ahụ bụ na ịnwere ike ịwụnye usoro nkwụsị nkwụsị iji hụ na ị nweghị mmiri mmiri. Kama nke ahụ, ịnwere ike ịhọrọ ịpụpụ ahịa azụmaahịa gị gbasara mgbe ngwa ahịa ga-emegide gị site na obere ego. Dịka ọmụmaatụ, kama ịmechi ahia gị na ọnụego mmiri mmiri nke 10%, ị nwere ike itinye iwu nkwụsị gị na 2%.
Nke a bụ otu usoro iwu nkwụsị si arụ ọrụ mgbe ị na-agbasa ịkụ nzọ:
N'ịnọgide na ngwaahịa Apple, ka anyị kwuo ugbu a ọnụahịa dị ogologo bụ $ 250.0 - nke pụtara ihe 250.0
Na-ere ahịa na oke 10%, nke ruru £ 1,000 osisi na £ 10,000 ahia nha
Ma, ịchọrọ igbochi ọnwụ gị na 2%
Iji nweta ọnụahịa ego nkwụsị anyị, anyị kwesịrị iwepu 2% site na ọnụahịa dị ogologo nke ihe 250.0
2% nke ihe 250.0 bụ 5.0 isi, yabụ a ga-etinye iwu nkwụsị anyị na isi 245.0
Dị ka nke dị n'elu, 'ọnọdụ kachasị njọ' ga-abụ ngwaahịa Apple na-agbadata uru site na 2%. Ọ bụrụ na o mere, ị ga-efu £ 200 na ahia ga-emechi (2% nke £ 10,000 ahia size). Agbanyeghị na ego furu gị, ọ bụrụ na usoro nkwụsị nkwụsị adịghị, ị nwere ike tufuo akụkụ gị niile - nke bụ £ 1,000.
Na-agbasa Bettụ readtụ Taxtụ-Free
N'adịghị ka ọdịnala ọdịnala, CFDs, ma ọ bụ uru mgbasa ozi na-agbasasịkarị ụtụ isi. Nke a bụ n'ihi na a na-ele ụlọ ọrụ ahụ anya dị ka ịgba chaa chaa, na-abụghị ahịa azụmaahịa.
Dị ka ndị dị otú a, ọ bụrụ na ị bi na mba ebe ịgba chaa chaa na-enweghị ụtụ isi, nke a bụ olileanya na ikpe gbasara ịgbasa, kwa. Agbanyeghị, a dụrụ gị ọdụ ka ịlele nke a na ọkachamara ụtụ isi na obodo gị.
Otu esi amalite ịgbasa ịkụ nzọ taa
Ọ bụrụ n’ị gụla ntuziaka anyị ruo ugbu a, ma ị chere na ịkụ nzọ na-agbasa dị mma maka ebumnuche itinye ego na ogologo oge - anyị ga-egosi gị ihe ịkwesịrị ime iji bido taa.
Nzọụkwụ 1: Chọta onye na-agbasa nzọ ịkụ nzọ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ igbasa nzọ na ntanetị, ị ga-achọ onye na-ere ahịa kwesịrị ekwesị. Imirikiti mgbasa ozi ịkụ nzọ na-akwado CFDs, yabụ na ị nwere ike iji saịtị ngwakọ.
Ka o sina dị, na ọtụtụ ebe ịkụ nzọ na-agbasa na ntanetị n'ịntanetị, ịkwesịrị ijide n'aka na ikpo okwu dị mma maka gị. Nke a kwesịrị ịgụnye usoro dịka ụkpụrụ, usoro ịkwụ ụgwọ, ngwa tradable, ụgwọ, na nkwado ndị ahịa.
Iji nyere gị aka n'okporo ụzọ ahụ, anyị edepụtarala anyị ise gbasara ịkụ nzọ ịkụ nzọ nke 2021 kwupụta na ala peeji a.
Ozugbo ịchọtara usoro ịkụ nzọ na-agbasa na-egbo mkpa gị, ị ga-emepe emepe akaụntụ. Dị nnọọ ka saịtị ọ bụla na-etinye ego, usoro a ga-achọ ụfọdụ ozi nkeonwe gị.
Dika mgbasawanye ahia bu uzo di egwu nke ulo ahia, onye ogha ahia gha aju gi ajuju otutu otutu iji choputa ihe omuma gi. Nke a bụ iji hụ na ị ghọtara nke ọma ihe egwu dị na ịkụ nzọ ịkụ.
Tupu ị nwee ike itinye azụmaahịa izizi ịkụ nzọ izizi gị, ikwesiri inyocha njirimara gị. N'ọtụtụ oge, ịnwere ike ịme nke a site na itinye ngwa ngwa nke paspọtụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala.
Fọdụ ndị na-ere ahịa ga-ajụkwa maka akaebe nke adreesị. Ọ bụrụ na ha, ị nwere ike bulite akwụkwọ ndekọ ego ụlọ akụ na nso nso a ma ọ bụ ụgwọ ọrụ.
A ga-agwa gị ugbu a ka ị kwụọ ụgwọ akaụntụ ịkụ nzọ gị. Imirikiti nyiwe ga-arịọ gị ka ị zute obere ego nkwụnye ego - nke na-abụkarị na £ 50- £ 150.
N'ihe banyere nhọrọ nkwụnye ego, nke a na-agụnyekarị ihe ndị a:
Nyefee Akaụntụ Akaụntụ
Ewezuga nhọrọ nnyefe ego nke ụlọ akụ, a na-akwụnye ego na nkwụnye ego gị na-agbasa ozugbo.
Nzọụkwụ 5: Debe ahia ịkụ nzọ na-agbasa
Ozugbo i debechara ego, ị nwere ike tinye ahịa izizi ịkụ nzọ izizi gị. Nwere ike ịchọgharị n'ọtụtụ ahịa na-agbasa mgbasa ozi nke onye na-ere ahịa na-enye, ma ọ bụ naanị tinye ego na igbe ọchụchọ.
Ozugbo ịchọtara ihe ịchọrọ ịzụ ahịa, ịkwesịrị ịtọ iwu.
Họrọ site na ogologo ma ọ bụ obere iji
Nyochaa oke mkpa
Họrọ nkwụsị nkwụsị na-ebute ọnụ ahịa
Debe ahia gi
Ozugbo ahia gị dị ndụ, ịnwere ike imechi ya n'oge ọ bụla site na ịtụkwasị usoro ọzọ. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ị gara ogologo oge, dowe obere oge iji mechie azụmaahịa ahụ na visa.
Ebe ịkụ nzọ kacha mma na 2021
Tochọrọ ịmalite ịgbasa ịkụ nzọ ugbu a, mana ijide n'aka na ikpo okwu ị ga-eji? N’okpuru ị ga - ahụ saịtị saịtị ịkụ nzọ ise kacha elu n’afọ 2021. A na - achịkwa usoro nchịkọta anyị niile kachasị elu, na - enye gị ohere ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego, ma nye gị ohere itinye ego na kaadị debit / kaadị akwụmụgwọ.
1. IG –Best Onye Gbasara ịkụ nzọ ịkụ nzọ
Nhọrọ anyị dị elu na-aga IG. malitere na 1974 - onye na-ere ahịa na UK na-enye CFDs, Forex, ma gbasaa ahia ịkụ nzọ. N'ezie, ị ga-enweta ohere karịa ahịa 17,000, nke buru ibu.
Ka o siri dị, ma ị na-achọ ịgbasa ego nzọ, ebuka, indices na ọla edo - IG nwere ike nwee ahịa maka gị. Nkwụnye ego pere mpe na-amalite na £ 250, ma ị nwere ike iji ego debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ akaụntụ akụ were were akaụntụ gị. A na-achịkwa ikpo okwu site na ụlọ ọrụ ikikere na UK, Singapore, na Australia.
Tụọ ahịa ọla edo na naanị 0.3 pips
Gaa na IG
2. Spreadex - Spgbasa nzọ na Ego Ego & Egwuregwu
Spreadex bụ ọkachamara gbasara mgbasa ozi ịkụ nzọ na-ekpuchi ahịa azụmaahịa ọdịnala na egwuregwu.
N'ihe kariri ihe ngosi 10,000 na-agbasa ngwa ahia, otutu ihe ndi ozo na-ekpuchi. Nwere ike ịtọgbasa nzọ nzọ si dị 10p kwa ihe, na kacha nta ego na-amalite na at 1. A na-akwado ọtụtụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, na onye na-ere ahịa holda ikike na UKs FCA.
10,000+ ahịa ego
Gbasaa ịkụ nzọ na egwuregwu
Ntanetị kacha nta nke naanị £ 1
Kwesiri ịgafe ego kredit ma ọ bụrụ na itinye ihe ngosi
Enweghị nkwado maka e-wallets
3. Nkọwa obodo - Ebe kachasị mma ịgbasa ịkụ nzọ
Dị ka IG, City Index bụ onye na-ere ahịa ọtụtụ ihe na-ekpuchi CFDs, Forex, ma gbasaa ịkụ nzọ. You'll ga-enwe ohere ịnweta naanị ihe karịrị 8,000 ahịa, ma gbasaa na-asọmpi.
A na-achịkwa onye na-ere ahịa na UK na ọtụtụ n'ihu, ọ nwere aha dị ogologo nke malitere na 1983. can nwere ike mepee akaụntụ na nkeji, nkwụnye ego na-amalite na £ 100, ma usoro ịkwụ ụgwọ na-akwado gụnyere debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ nnyefe ụlọ akụ.
4. Ahịa CMC - Gbasaa ịkụ nzọ ịkụ nzọ na Ngwá Ọrụ Njikwa Egwu
Ahịa CMC na-enye ebe a na-agbasawanye ịkụ nzọ. Nke a na-agụnye ọtụtụ puku ahịa n'ofe ebuka, indices, ETFs, ike, ọla siri ike, na ọbụna cryptocurrencies. Amalitere na 1989, A na-achịkwa CMC Markets nke ọma.
N'elu ọrụ na ụgwọ dị ala, CMC Markets na-enye ọtụtụ ngwaọrụ njikwa ihe egwu. Nke a ga - ahụ na ị ga - eme ka ịgbanyụ ego ịkụ nzọ gị pere mpe.
5. FXCM– Kachasị mma na-agbasa ịkụ nzọ ịkụ nzọ
FXCM bụ onye na-akwụ ụgwọ na-agbasa ego na-akwụ ụgwọ dị ala nke na-enye gị ohere itinye ahịa na naanị 7p kwa osisi. Nke a zuru oke ma ọ bụrụ na ị malitere na oghere ma chọọ ịmalite na obere osisi.
Na ore ahia ọtụtụ iwu usoro iwu, ọ na-akwadokwa CFD na Forex trading. Ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ na-enye, yana a na-anakwere ngwa ngwa na ebe ahụ.
Na-agbasa site na naanị 0.6 pips
Nwepu nke dị n'etiti 2: 1 na 30: 1
Osisi dị ala nke naanị 7p kwa isi
Nhọrọ nke ahịa dị obere
Gaa Leta FXCM
Anyị nwere olile anya na site n'ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị n'ụzọ zuru oke ugbu a ị nwere ogo ogo 360 maka etu ọrụ ịkụ nzọ si agbasa. Anyị ekpuchila ihe niile site na otu ị ga - esi merie ma tufuo ego mgbe ị na - agbasa ịkụ nzọ, ọtụtụ ngwa ọrụ ego ị nwere ike ịzụ ahịa, yana ụdị ngwa njikwa ihe egwu ị nwere ike ịwụnye iji belata nsogbu gị
N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na ịgbasa ịkụ nzọ agaghị abụ maka onye ọ bụla, ọ na-enye ọtụtụ elele karịa ọwa ọdịnala ọdịnala. N'ihu ụzọ nke a bụ azụmaahịa na-anaghị akwụ ụgwọ ọrụ na - anaghị akwụ ụtụ isi - ma gbasaa nke na - enweghị oke na ngalaba ntinye ego ndị ọzọ.
N’ụzọ dị oke mkpa, gbaa mbọ hụ na ịghọta ihe kpatara nsogbu ịgba chaa chaa na-agbasa tupu ị mikpuo onwe gị. A sị ka e kwuwe, ọtụtụ ndị ahịa ọhụụ ọhụụ na-efunahụ ego mgbe ha bidoro, yabụ jiri nwayọ na-aga ije.
Kedu ihe m nwere ike ịzụ ma m gbasaa ịkụ nzọ n'ịntanetị?
Platformsgbasa nyiwe ịkụ nzọ na-enyekarị gị otu akụ ahụ ị ga-azụ site na CFDs. Nke a ga - agụnye ihe niile sitere na ebuka, ndeksi, ngwa ahịa, ọmụrụ nwa, ETFs, yana mkpuchi.
Kedu ka m ga esi enweta ego mgbe m na-agbasa nzọ?
Echiche dị oke mkpa bụ ịtụle ma akụnụba ọ ga-abawanye ma ọ bụ belata uru ya na ọnụahịa ahịa ya ugbu a. Maka 'isi' nke ọ bụla na ị bụ eziokwu, ị na-enweta ego ruru ka osisi gị.
Kedu ihe 'mgbasa' na mgbasa ịkụ nzọ?
Nke a bụ ihe dị iche na ọnụahịa 'ogologo' na 'mkpụmkpụ' nke akụ - a na-ekwukwa ya na isi. Iji maa atụ, ọ bụrụ na ihe dị iche bụ ihe ise 5, ịkwesịrị ịme opekata mpe ihe ise naanị iji mebie.
A na-achịkwa ịkụ nzọ agbasa?
Ee, a na-achịkwa ịkụ nzọ na-agbasawanye n'otu ụzọ ahụ dị ka oghere CFD ma ọ bụ oghere. Ndị nchịkwa isi gụnyere FCA (UK), ASIC (Australia), na CySEC (Cyprus).
Kedu ka esi agbakọ uru na mgbasa ịkụ nzọ na-agbasa?
Uru sitere na 'osisi-per-point' mbụ gị, yana ọnụọgụ nke akara ahia gị nwetara. Iji maa atụ, ọ bụrụ n ’ire Apple na 200 isi dị elu karịa nke ị kwụrụ na mbụ, ma ị kwụnye £ 5 n’otu isi, ị gaara eme £ 1,000.
Kedu ka m ga-esi hapụ oke m na mgbasa ịkụ nzọ?
Ọ bụrụ na ahia gị na-emegide gị site na pasent hà ka oke gị, azụmahịa gị ga-agba mmiri. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na oke gị bụ 5%, na uru ahịa gị na-agbadata site na 5%, ahia gị ga-emechi ma onye na-ere ahịa ga-edebe ego gị.
Kedu ka m ga esi enweta ego na mgbasa ozi ịkụ nzọ m?
Ma ọ dịkarịa ala, gbasaa saịtị ịkụ nzọ na-enyekarị gị nhọrọ nke itinye ego na debit / kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ akaụntụ akụ. Fọdụ na-ekwe ka e-wallets dị ka Paypal na Skrill.